စစ်ရေး နှင့် ငွေကြေး အသုံးစရိတ်
Mar 21, 2021 1 min read Saved Articlesနွေဦးတော်လှန်ရေး
ရေးသားသူ - မျိုးဟန်ထွန်း
စစ်ဖြစ်လျှင် ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ် အတော်များပါတယ်။ တဦးတယောက်သုံးတဲ့ ကျည်ဆန်တတောင့်ချင်းကနေ .. တကဒ်လုံးဆွဲထည့်လိုက်တဲ့ ကျည် .. ဟိုးအပေါ်ကနေ ပစ်ချတဲ့ ဗုံး .. အစုံပလုံ ကုန်ကျစရိတ်ဟာ အနည်းဆုံး တနှစ်ကုန်ကျစရိတ် USD$ ၁ဝ ဘီလီယံကျော်ကနေ ဘီလီယံ ၁ဝဝ ကျော်ထိ ကုန်ကျပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ပလိပ်ကြီးလို့ တင်စားတဲ့ အမေရိကန်ဟာ စစ်ရေးအတွက် အသုံးစရိတ်ကို မဟားဒယားသုံးခဲ့တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေဟာ မနည်းပါဘူး။ သူတို့အဲဒီကုန်ကျစရိတ်မျိုး ဘယ်နိုင်ငံမှ မသုံးနိုင်ပါ။ အဲဒီတော့ United States Secretary of State .. Antony J. Blinken က ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ ပတ်လောက်က အမေရိကန်တွေဟာ စစ်တိုက်ပြီး အဖြေမရှာတော့ပါဘူး .. ကုန်ကျစရိတ်များလို့ပါ .. နောက်ဘာမှလည်း မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီး ပြောခဲ့တော့ လူတွေအားလုံးဟာ မြန်မာပြည်အရေးမှာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ မြန်မာပြည်အရေးတင် မဟုတ်ပါဘူး .. လက်နက်ကိုင် အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က နိုင်ငံတချို့လည်း အခုလိုပါပဲ။ သို့ပေမယ့် သူပြောသွားတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပြန်ကြည့်ပါ ..
[Reference 1: A Foreign Policy for the American People]
ဘာဆိုလိုထားသလဲဆိုတော့ တချိန်က ဆွမ်းကြီးလောင်းပွဲမှာ သူပဲ ဒယိကာလုပ်နေတာကနေ .. အခုဆို စုပေါင်းဆွမ်းကြီးလောင်းပွဲလုပ်ဖို့ ပြောလာတာပါပဲ။ အဲဒီကောက်နှုတ်ချက်ကတော့
Our alliances are what the military calls force multipliers. They’re our unique asset. We get so much more done with them than we could without them. So we’re makingabig push right now to reconnect with our friends and allies, and to reinvent partnerships that were built years ago so they’re suited to today’s and tomorrow’s challenges. That includes countries in Europe and Asia that have been our closest friends for decades, as well as old and new partners in Africa, the Middle East, and Latin America..
ဆိုပြီး အတိအလင်းပြောသလို .. .President Joe Biden ကလည်း ထပ်လောင်းပြီး R2P လို ကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး UN Security Council Permanent Representatives တွေကို အခုလို ထပ်ပြောပါတယ် ..
the President also noted the need for the UNSC action onarange of regional crises, including those in Burma, Ethiopia, Libya, Syria, and Yemen.
[Reference 2: President Biden Hosts Virtual Gathering of UN Security Council Permanent Representatives].
ဆိုလိုတာက .. မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး .. စစ်ရေးနဲ့ ဝင်ရောက်ဖို့ တနည်းမဟုတ် တနည်းနဲ့ ပြောနေတာပါ။ .စစ်ရေး နှင့် ငွေကြေး အသုံးစရိတ် .. ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ .. အမေရိကန်နဲ့ပါတနာလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတိုင်းဟာ အမေရိကန်ဦးဆောင်မည့် စစ်ပွဲတိုင်းကို ကုန်ကျစရိတ်ကမကထ လုပ်ပြီး ဝင်ထည့်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ စစ်ရေးအသုံးစရိတ်ဟာ အတော်ကြီးပါတယ်။ အမေရိကန်တနိုင်ငံတည်း တချိန်ကလို မသုံးနိုင်။ ထို့ကြောင့် အခြား alliances တွေကို our greatest assets .. force multipliers အဖြစ် မင်းတို့လည်း ကုန်ကျစရိတ်ထမ်းပါ .. ဝင်ချပါ ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ယနေ့ မြန်မာပြည် အရေးကို ပြောနေတာ ပိုစိတ်သထက် စိတ်လာပါတယ်။ စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာ ဥုံဖွ ဆိုပြီး တိုက်လို့မရပါ။ ခင်ဗျားတို့ အရပ်ထဲ ဆွမ်းကြီးလောင်းပွဲ လုပ်မယ်ဆိုတောင် ငွေကြေးကမကထလုပ်မယ့်သူ၊ တရက်ဘယ်လောက်ထည့်တာ၊ ဒန်အိုးဒန်ခွက် ငှားတာ၊ ချက်ပြုတ်တာ၊ ဇာတ်ဆရာခေါ်၊ ဘုန်းကြီးပင့် ပြန်ပို့တာကအစ အစီအစဉ်နဲ့ လုပ်ကြရတာ မဟုတ်လား .. ဥုံဖွဆိုပြီး ဖြစ်မလာဘူးလေ။ ဆိုလိုတာက သူတို့အနောက်မှာ ဘယ်လောက်ထိ ဆွေးနွေးနေမလဲဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်။ War plan, strategy, စတဲ့ များပြားလှစွာတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဓါးစာခံ ဆန်ဆန် ဖမ်းဆီးထားခြင်း
လတ်တလော အန်တီရယ်၊ သမ္မတကြီး ဦးဝင်းမြင့်ရယ်၊ မန်းလေးက ဆရာ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ ဆရာ ဒေါက်တာဦးရယ်လွင်၊ ဦးမျိုးသစ်၊ ရန်ကုန်ကဆိုလျှင် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ကိုရဲမင်းဦးစသည့် ရွေးကောက်ခံအမတ်တွေရော အထင်ကရတွေကိုပါ မအလက ဓါးစာခံဆန်ဆန် ခေါ်ဖမ်းထားကြတာ လူတိုင်းအသိပါ။ သူတို့အနေနဲ့ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ အကြောင်းပြပြီး ထိန်းသိမ်းသလိုလိုနဲ့ သူတို့ကို ဘာလိုနည်းနဲ့မှ တုံ့ပြန်လို့ မရအောင် ပြန်လုပ်လို့ မရအောင် လုပ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ မြန်မာစကား အညှာကိုင်တဲ့ သဘောပဲ။ မည်သို့ပင် အကတိလိုက်စားတယ် .. မဲမသာမှုစတာတွေ ဘယ်လောက်ပြောနေပြောနေ .. ဘယ်နိုင်ငံကမှ မယုံတော့ပါ။ လက်လည်း လက်မခံတော့ပါ။ .သို့ပေမယ့် .. စစ်ရေးအရ အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဝင်လာတောင် .. ဝင်တိုက်ချင်တောင် အတော့်ကို ခေါင်းစားစေတဲ့ အဖြစ်ပါ။ ဘင်လာဒင်ကို ဝင်ကင်တာ၊ ကဒါးဖီးကို ဝင်ကင်တာ၊ ဆဒ္ဒန်ဟူစိန်ကို ဝင်ကင်တာ တဖက်ကမှာ ဓါးစာခံဆန်ဆန် ဖမ်းထားတဲ့သူ မရှိဘူး။ အခု မြန်မာပြည် ပြသနာက ဗုံးပဒေသာပင် ပေါက်ကွဲအောင်ကျဲသလို အပေါ်ကနေ ကျဲလို့မဖြစ်တဲ့ အဖြစ်မျိုး။ သို့ပေမယ့် သူတို့မှာ နည်းပညာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သေချာ Precision ကျကျ laser guided bomb နဲ့ ကင်လို့ ဖုတ်လို့ ရတဲ့ နည်းတွေ အများကြီး။ Risk လည်း အများကြီး ယူရပါလိမ့်မယ်။ .မြန်မာပြည် လတ်တလာ အခြေအနေအရ .. ဆွမ်းကြီးလောင်းရင် ၁ ရက်တောင် မကြာပါဘူး။ တကယ်ကြီးကို ပြောတာ။ 1st Phase Airstrike မှာတင် မဲနယ်ရောင်သုတ်ထားတဲ့ ပုဇင်းတွေဟာ သံရည်ကြိုစက်ရောက်သွားမယ့် ကိန်းပါ။ မြန်မာပြည်မှာ မဲနယ်ရောင်သုတ်ထားတဲ့ ပုဇင်းဟာ လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။ တကယ်တန်း Surprise အနေနဲ့တီးတောင် အပေါ်တောင် ပျံတက်သွားချိန် မရလောက်ပါဘူး။ ကျန်တဲ့ တာယာကို အကွင်းလိုက် အဖြူသုတ်ထားတဲ့ ကားတွေပေါ် တင်ထားတဲ့ ဒုံးတွေဟာ surface-to-air missile (SAM) တို့ round-to-air missile (GTAM) စတဲ့ ဟာတွေကလည်း တကယ်ကြီး အလုပ်လုပ်လား မလုပ်လား မသိရိုးအမှန်ပါ။ သို့ပေမယ့် F-35 Stealth Fighter Jets တွေ ဝင်လာလျှင် အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဘယ်အချိန်ဘယ်က လာနေမှန်းလည်း Radar မှာ မပြပါ။ အဲဒီတော့ မအလတို့ကို လာတိုက်လျှင် လာတိုက်တဲ့သူက နိုင်မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ မေးစရာကို မလိုပါ။
မေးစရာတခု စိုးရိမ်စရာတခုရှိတယ် .. တရုတ်ပါလာနိုင်မလား .. တရုတ်က ကျူးကျော်လာနိုင်မလားဆိုတာပါပဲ။ ကိုရီးယားကိစ္စမှာ တရုတ်ပါပါတယ် .. သူ့စစ်သားတွေလည်း သေပါတယ် .. ဗီယက်နမ်လည်း အတူတူပါပဲ .. နည်းတော့ နည်းပါတယ် .. ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အိမ်နီးချင်း နီးစပ်နေလို့ .. သို့ပေမယ့် ဟို နှစ်နိုင်ငံ ကိစ္စမှာ ၂ သင်း ၂ ဖွဲ့ ချတဲ့ ပြသနာ။ မြန်မာပြည်မှာက လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ အများကြီးနဲ့ ဖြစ်သလို ဝင်လာလျှင် အကုန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပြသနာကို တရုတ်ပါ ခံရလိမ့်မယ်။ United Nations ရဲ့ လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် မအလဖက်ကနေ ဝင်တိုက်ခွင့်လည်း မရှိပါ။ တခုပဲ ရှိတယ် .. သူတို့ နယ်နဲ့ Buffer စစ်တပ်ဆန်ဆန်လုပ်ထးတဲ့ ဝ စစ်တပ်ကိုပဲ သတိထားရပါမယ်။ သို့ပေမယ့် ဝ စစ်တပ်ဟာ တဖက်ကို သြဇာခံလျှင် သူတို့အခွင့်အရေးဟာ အပြီးတိုင် ဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မယ်။ ဒီဖက်ကို ပေါင်းလျှင် အင်အားအရ ဘာပဲပြောပြော သူ့အနေနဲ့ Status တခုအဖြစ် လတ်တလော ပြောပြောနေတဲ့ Federal Army မှာဖြစ်ဖြစ် Federal အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖြစ် ရပ်တည်ဖို့ အများကြီး အခွင့်အရေး ရှိပါတယ်။
ပြည်တွင်းစစ် သို့မဟုတ် ဘယ်သူတွေက ငါတို့လူလဲ
သူတို့ မတိုက်လို့လည်း မပူကြပါနဲ့ .. ယနေ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ CRPH က Federal Army အတွက် ဆွေးနွေးနေကြသလို .. မအလတို့ဖက်က ဖမ်းထားတဲ့သူတွေကို ပေါက်ကရ လုပ်လေ ရုပ်လုံး မပြနိုင်လေ ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးသလိုဖြစ်လေလေပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ တခုတော့ ရှိပါတယ် .. စစ်ဖြစ်တိုင်း ဘယ်သူက ဝင်ဆော်ဆော် .. အထဲမှာ ရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေ အားလုံးက တန်းတူညီမျှ တန်ဖိုးထားတဲ့ Agreement တွေ ယူကြရပါတယ်။ ယနေ့ အီရတ်တို့ ဆီးရီးယားတို့မှာ ချပြီးမှ အချင်းချင်း နယ်မြေလု ပြန်ချသလိုမျိုး ဖြစ်လို့မရပါ။ အဲဒီတော့ယနေ့ CRPH နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အထူးသဖြင့် အင်အားကြီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ Agreement တွေ ဖြစ်လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တန်းတူညီမျှ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ မြေဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း မင်း နဲ့ ငါ .. အားလုံး တန်းတူပဲ ဆိုတဲ့ ညီညွတ်တဲ့ Agreement လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ကတိ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ယုံကြည်ကြပါ။ အားလုံး ကတိ ဆိုတာနဲ့ပဲ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ လက်ပါးစေ အပေါင်းအပါတွေကို အပြတ်တီးရမယ့် အဖြစ်ဖြစ်လာပါတယ်။.ယနေ့တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တောင် နေပြည်တော်နဲ့ ကီလိုမီတာ ၈ဝ က နေ ၁ဝဝ ဝန်းကျင်အနီးထိ ရောက်နေတာ .. ရန်ကုန်ဆိုလည်း ကီလို မီတာ ၆ဝ - ၈ဝ အတွင်းမှာ ရှိနေတာ။ တခုခုဆို ဝိုင်းဆွမ်းကြီးလောင်းမယ့်အဖြစ်ကြောင့် ပြေးပေါက်တောင် မရှိပါ။
မမျှော်လင့်တဲ့ ကံကြမ္မာဆိုး ဖြစ်လာနိုင်
မဖြစ်စေချင်ပါဘူး .. သို့ပေမယ့် အန်တီတို့ သမ္မတကြီးတို့ ဖမ်းထားတဲ့သူတွေ တခုခုဖြစ်ခဲ့လျှင် .. အဲဒီနောက်ပိုင်းဟာ မြန်မာပြည်မှာ စစ်အာဏာရှင်ရော နောက်လိုက်တွေ အားလုံးပါ ကောင်းကင်က Hellfire တွေ ဗုံးပဒေသာပေါက်သလို ကျလာမယ့်နေ့တွေအဖြစ် ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်နေပါစေ .. လတ်တလော မအလ နဲ့ အပေါင်းအပါ အားလုံးဟာ နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးကို တက်ဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်။
မြန်မာ့အရေးဟာ အိမ်နီးချင်း ASEAN နိုင်ငံတွေကပါ အောကြောလန်ဖြစ်လာသလို မအလ လက်ရုံး ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်း ကိုယ်တိုင် Sanctions လုပ်လုပ် Isolations လုပ်လုပ် ဂရုမစိုက်ဖူး လို့ လူမိုက်ဆန်ဆန် အတိအလင်း ပြောပြီးသားပါ။ ဝဏ္ဏကျော်ထင် ဆိုတာတောင် .. သူ့ဝိုင်းကျပ်လိုက်လို့ .. နောက်တခါ ဒါမျိုး လာမတက်ဖူး ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးပြီး ပြောသွားပြီးသား။
COVID ကြောင့် မျက်ဖြူစိုက်နေတဲ့ US alliances တွေ တကယ်တန်း ဘယ်တုန်းကမှ စစ်မတိုက်ပဲ .. Weapons တွေကို ဆော့စရာလို လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ ကုန်ကျစရိတ် ဘယ်လောက်ကျခံမလဲဆိုတာပဲ အဓိကကျပါတယ်။ စာရေးသူ အမြင်မှာတော့ US and allies vow to restore democracy in Myanmar ဆိုတဲ့ စကားဟာ Promising Package ပေးပြီးသားပါ။ တဖက်မှာလည်း ဘယ်သူ ဘယ်နိုင်ငံမှလည်း မအလတို့ စစ်ကောင်စီကို အသိမှတ် မပြုပါ။ ဒီကိစ္စဟာ အချိန်အကြာကြီးလည်း ဆွဲနေလို့မရပါဘူး။
စာရေးသူ အထင်ပေါ့ .. ASEAN နိုင်ငံတွေ သို့မဟုတ် တခြားနိုင်ငံတွေက မအလတို့ကို နောက်ဆုံး တကြိမ် ချဉ်းကပ်ပြီး အပြုသဘောဆောင်မလားလို့ ထပ်မေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို မေးလာလျှင် ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ဖို့ ပြောလာလျှင် စောတက မတက်ကြပါနဲ့။ ဘာလို့ ဆွေးနွေးနေတာလဲ .. မလိုချင်ဘူး .. စတာတွေ မအော်ကြပါနဲ့။ သူတို့ သံတမန်နည်းအရ နောက်ဆုံး ချဉ်းကပ်ခြင်းပါ။ ပြောပြတာနော် .. အကယ်၍ အဲဒီအချိန်မှ မရလျှင် "You fight to win" ဆိုတဲ့ မင်းနိုင်အောင်သာ ချပါ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ စရိတ်မျှပေး စစ်ရေး ဆိုတာကြီး ဖြစ်လာမယ်လို့ မြင်နေမိတယ်။ .လက်ရှိ မြန်မာ့အရေးဟာ ရှေ့မတိုးသာ နောက်မဆုတ်သာပါ .. CRPH နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ကို ပံ့ပိုးပြီး တိုက်လျှင် အချိန်ကြာလိမ့်မယ် .. ဝိုင်းဆွမ်းကြီးလောင်းလျှင်တော့ အချိန်က မြန်လိမ့်မယ်။ ဒါပါပဲ။
ဘယ်နိုင်ငံတွေက စရိတ်မျှပြီး အကုန်ကျ ခံမလဲဆိုတာပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။.မှတ်ချက် .. လတ်တလော ထိပ်သီးတွေ ပြောဆိုနေကြသည့် .. စကားလုံးအသွားအလာပေါ် Personal Opinion အဖြစ် ကောက်နှုတ်တင်ပြပါသည်။ Decision makers တွေအနေနဲ့ စကားကို ဘယ်တော့မှ လက်လွတ်စပယ်မပြောပါ။
Credit to Myo Han Htun | Facebook